कोषद्वारा सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा : ६ लाख सञ्चयकर्ता लाभान्वित | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर कोषद्वारा सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा : ६ लाख सञ्चयकर्ता लाभान्वित
on: २९ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०७:२३ मुख्य खबर, समाचार
कोषद्वारा सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा : ६ लाख सञ्चयकर्ता लाभान्वित
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले अब रू. १० लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउने भएका छन् । कोषले सबै सञ्चयकर्ताको सामूहिक स्वास्थ्य बीमा गरिदिएपछि उनीहरूले यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउने भएका हुन् । अब सञ्चयकर्ताले साधारण औषधोपचारमा रू. १ लाखसम्म र घातक रोगको उपचारमा रू. १० लाखसम्मको खर्च दाबी गर्न सक्नेछन् । साथै, यसअन्तर्गत दुर्घटना बीमा पनि समेटिएको छ । तर, प्रत्येक शीर्षकमा विभिन्न शर्त र सीमा निर्धारण लागू हुने बताइएको छ ।
कोषले बुधवार यसका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग ३ वर्षे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छ । समझदारी पत्रअनुसार मङ्सिर १ गतेदेखि कोषका ६ लाख सञ्चयकर्ता यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । बीमा योजनाअनुसार सरकारी निकायका पुराना र नयाँ सञ्चयकर्ताहरू स्वतः बीमाको दायरामा आउनेछन् । यद्यपि, निजीक्षेत्रका सञ्चयकर्ताहरूको हकमा कम्तीमा ६ महीनासम्म नियमित कोषमा रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
पहिलो वर्षका लागि प्रति सञ्चयकर्ता रू. ४ सय २० का दरले जम्मा रू. २५ करोड २० लाख बीमाशुल्क निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको बीमाशुल्क कर्मचारी सञ्चय कोषले भुक्तानी गर्नेछ । मुनाफाबाट तोकिएको बीमाशुल्क भुक्तानी गरिने कोषको भनाइ छ । यद्यपि, बीमालेख नवीकरण गर्दा अघिल्ला वर्षका दाबी भुक्तानी र सञ्चयकर्ताको सङ्ख्याको आधारमा बीमाशुल्क परिवर्तन हुनसक्ने कोषले बताएको छ ।
औषधोपचारको सम्बन्धमा बिरामी सञ्चयकर्ताले बीमाअवधिमा रू. १ लाख नबढ्ने गरी स्वास्थ्य बीमाको रकम दाबी गर्न पाउँछन् । तर, वास्तविक खर्चको १५ प्रतिशत वा न्यूनतम रू. ३ हजारमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही रकम कट्टा गरेपछि मात्र भुक्तानी पाउनेछन् ।
कम्पनीले दाबी परेको ३० दिनभित्र यस्तो रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
घातक रोगको उपचारका लागि भने सञ्चयकर्ताले रू. १० लाखमा नबढ्ने गरी वास्तविक खर्च भुक्तानी पाउनेछन् । सरकारले तोकेको ९ घातक रोगका लागि मात्र यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीले घातक रोगको सम्बन्धमा ४५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अवकाश भएको ६ वर्षसम्म रकम भुक्तानी नलिएका सञ्चयकर्ताले पनि यो सुविधा पाउने छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनुुसार कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्ताको हकमा भने बिरामी भएको मितिभन्दा कम्तीमा ६ महीना अघिदेखि नियमित कोषमा रकम जम्मा गरेको हुुनुपर्ने छ ।
यो सुविधा लागू भएको दिनदेखि साधारणतर्फको उपचारका लागि ३० दिन र घातक रोगको उपचारका लागि ९० दिनपछि मात्र उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ सञ्चयकर्ताको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
बीमालेख नवीकरण गर्दा भने यो व्यवस्था लागू नहुने सञ्चय कोषले बताएको छ । नेपालमा उपचार सम्भव नहुने रोगको लागि भने सम्बन्धित चिकित्सको सिफारिशमा विदेशी अस्पतालमा गरिएको उपचारको पनि दाबी भुक्तानी गरिनेछ ।
कार्यक्रममा कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले नेपालीको अत्यन्त कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यो बीमा योजना ल्याएको बताए । आगामी दिनमा यस बीमा योजनालाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरविक्रम रायमाझीले अनलाइन प्रणाली भिœयाएर योजनालाई थप बलियो बनाउने बताए ।